०५:४९, २० सेप्टेम्बर २०१९ जस्तै गरी पुनरावलोकन
२४ bytes added , १ वर्ष अघि
१९:१५, १६ फेब्रुअरी २०१९ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
110.44.125.162 (कुरा गर्ने)
०५:४९, २० सेप्टेम्बर २०१९ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
182.75.167.186 (कुरा गर्ने)
'''किराँत''' शब्दले नेपालका मूलवासीप्रबजित जनजाति लाई नै जनाउँदछ वेद व्यासले लेखेको संसारको वैदीक सनातन धर्म वेदमा समेत यस भुभागमा वस्ने जातीलाई कीरात भनी व्याख्य गरेको छ र सो किराँत भित्र पनि धेरै थरहरू रहेको हुनाले बिभिन्न भाषा, लिपि, संस्कृतिहरू छन् ती मध्ये पनि मूख्य यस प्रकार छन्;<br>
किराँत भनेको नेपालका मुलबासीप्रबजित जाति हो.किराँतहरूको बसोबास नेपालको पूर्ब र हिमाल सम्म फैलिएको छ. यो जाति भनेको नेपालको सबै भन्दा प्राचीनकम जनसङ्ह्य भाको जाति हो र नेपालमा खेतिको सुरुवात् गर्नुका साथै सुङुर पालन आरम्भ गर्ने यिनै जाती हुन. [[काठमाडौं|काठमाडौं]]का गोपाल राजालाई हटाएर [[यलम्बर]] पहिला किराँती राजा भएका थिए. [[जनबादी गणतन्त्र चीन|चीन]]को [[तिब्बत]]सग इनिहरूले निक्कै रम्रो बेपार् गरेका थिए। त्यस्तो बेपार् अहिले सम्मको सरकार्ले पनि गर्न सकेको छैन । किनभने त्यतिबेलाको नेपाली मुद्रा तिब्बेत्मा चल्थियो। र मुख्य कुर के भने किरात जातिको उद्द्गम स्थल पनि चिन नै भयेको अनुमान छ।[[जनबादी गणतन्त्र चीन|चीन]]को ह्यन्ग्गो र यान्सिकन्ग् भन्ने नदिको किनार लाइ किरात उद्द्गम स्थल मानिएको छ। र त्यहा बाट शिकार् गर्न भारतको उत्तर् पूर्वि पहाड् तिर आये र त्यहाको [[कैलाश]] पहाड्मा केही बर्स बसेको इतिहास् म पड्न पाइन्छ्. र त्यहा कुरा अनुकुल् हावा पानीको खोजिमा नेपाल्को पूर्वि भाग् हुदै काठमाडौंसम्म आइपुगेको हो. र अहिले सम्म इनिहरूले राज्नीतिक् शैशिक् छेत्रम धेरै विकास् गरेको छ।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/746368" बाट अनुप्रेषित